တဝက်ကျော်ဘယ်နှစ်ယောက်ဘတ်စကက်ဘော, Kolka နှင့်သူတို့တစ်ဦးစီတစ်ဦးဘတ်စကက်ဘောကစားဘက်အနိုင်ရတဲ့အချိန်ကြာ 40 မိနစ် (ဤမျှလောက်နောက်ဆုံးကျော်အများဆုံးအချက်များနှင့်အတူအသင်းဖြစ်ပါတယ် ...
Carbohydrate“ window” ကိုဘယ်လိုပိတ်နိုင်မလဲ။ ဘယ်အစားအစာတွေကအကောင်းဆုံးလဲ။
Carbohydrate“ window” ကိုဘယ်လိုပိတ်နိုင်မလဲ။ ဘယ်အစားအစာတွေကအကောင်းဆုံးလဲ။ လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးနောက်အစာအာဟာရကိုလေ့ကျင့်ပြီးနောက်ချက်ချင်းလိုအပ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံး 20 မိနစ်များတွင်။ အကယ်၍ သင်သည်အစားအစာမှရှောင်ရှားပါက ...
ရပ်ဘီနှင့်အမေရိကန်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတို့၏ကွာခြားချက်များမှာအဘယ်နည်း။ ငါ့ကိုခေါ်ပါ “ 317 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိသည့်စွယ်စုံကျမ်းကိုတက်နိုင်သလား” - သင်သည်ထိုအလေးချိန်ကိုတက်နေသည်ဟုစိတ်ကူးယဉ်နေပါသလား၊ ဗစ်တာ? 263 အလေးကမ္ဘာ့စံချိန် ...
အဘယ်မျှလောက်ကြာလေ့ဘေ့စ်ဘောကစားပွဲကြာသနည်း? fixed ဘေ့စ်ဘောကစားပွဲအချိန်။ အလေ့အကျင့်အတွက်ဂိမ်းအများအားဖြင့်ဝက်ကနေ2မှကြာပေမယ့်သီအိုရီများတွင်ဂိမ်း, အသတ်မရှိဆက်လက်နိုင်ပါတယ် ...
အဘယ်သူသည်လက်ချောင်းများအင်္ဂတေပတ်ရစ်လျက်ရှိသည် volleyball သောအရာကိုအဘယ်သူသိနိုင်သနည်း ငါအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ထင်, ပြီးတော့ boksry elastic ပတ်တီး, ကိုယ်လက် pereatyvayut ။ မေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏!
ဘယ်နှစ်ယောက်စတိုင်များကွန်ဖူးလော တကယ်တော့ကွန်ဖူးနှင့်ဝူရှုး၏ကွန်ဖူးစတိုင်များ 130 ပဲမဟုတ်တော့တဲ့ကိစ္စတဦးတည်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ခံပညာစတိုင်များရာပေါင်းများစွာရှိနေပါသည်။ ရိုးရာစတိုင်များတစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစာရင်းကို ...
အမေရိကန် - ဘိလိယက်ကစားခြင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုရေးပါ
အမေရိကန် - ဘိလိယက်ကစားခြင်းအတွက်စည်းကမ်းချက်များအပြည့်အစုံရေးပါ။ ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်။ 8 ဘောလုံးများကိုပထမဆုံးရေတွက်ပါ။ အသုံးပြုသောဘောလုံး - ဒီဂိမ်းကိုဘောလုံး (၁၆) လုံးဖြင့်ကစားသည်။ တစ်ခုချင်းစီသည် cue ball သို့မဟုတ်ရည်မှန်းသည့်ဘောလုံးဖြစ်နိုင်သည်။ အစီအစဉ် ...
ဘတ်စကက်ဘောဆိုတာဘာလဲ အဘယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောနာမကိုအမှီ ??? KES-BASKET (KES-BASKET ကျောင်းဘတ်စကက်ဘောပြိုင်ပွဲ) 2007 နှစ်တွင်၊ KES-BASKET ကျောင်းဘတ်စကက်ဘောပြိုင်ပွဲချန်ပီယံစီမံကိန်းကိုဒေသတွင်းအနေဖြင့် Perm နယ်မြေတွင်စတင်ခဲ့သည်။
ငါမိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကိုငါအလေးအနက်လူသတ်သမားဖြစ်လာရန်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်ယူချင်ကြတယ်။ သငျသညျစစ်တပ်ကကိုသွားပါ, ပြီးတော့သင် VDV ရဲ့အစမှာ sign up ကိုဆုံးဖြတ်ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေအဝါရောင်နံရံများနှင့်အတူအိမ်သူအိမ်သား .. လူသတ်သမားများပညာရှင်များဖြစ်ကြသည် ...
ဂျူဒိုထဲမှာမှတ်အကောင့်မှဘယ်လိုနေသလဲ? ကိုကာကိုလာ, Yuko, waza-Ari, Ippon ။ အမြင့်ဆုံးရမှတ် ippon ဖြစ်ပါသည်, waza အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော-Ari ဖြစ်ပါတယ်အောက်တွင် Yuko esch အဆိုပါနပန်းသမားများအား၏တဲ့အခါမှာတဦးတည်း ippon (စင်ကြယ်သောအောင်ပွဲ) ချီးမြှင့်ဖြစ်ပါတယ် ...
ယင်းအပေါက်၏ဘေးထွက်အပေါ်စက်ဘီးပြုပြင်ကိရိယာအစုံနီနေရောင်လိမ္မော်ရောင်, iced မျက်နှာပြင်ယူသွားရန်လိုအပ်ကြောင်းအပေါ်တစ်ဦးရော်ဘာကော်ကော်လည်းမရှိ,2ကျော်ပြီးတော့ 2e 5-15 မိနစ်စောင့်ဆိုင်းနေဘက်ခြမ်းမှာနေတဲ့ပါးလွှာသောအလွှာသိက္ခာချ ...
Deadlift, my results ... ဤစီမံချက်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ရုရှား Powerlifting Federation of 2010-2013gg ၏ powerlifting အတွက်ဥတုစံချိန်စံညွှန်းများဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည့် link ဇယားဖြစ်သည်။ အခြေအနေအတိုကောက်: CCM - အားကစားမာစတာအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ...
ရုရှားအမျိုးသားရေးဂိမ်းများကိုမီးရှူးတိုင်အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကဘာတွေလဲ? ဂိမ်းတွေအတွက်ဂိမ်းစည်းကမ်းများပွင့်လင်းအာကာသမြက်ခင်း, မြက်ခင်း, အိမ်များ၏ရှေ့မှောက်၌ကျယ်ပြန့်လမ်းတစ်ကျယ်ဝန်းခြံရွေးချယ်ထားကြသည်။ အဆိုပါကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအပေါ်အားလုံးအတွက်ရပ်တယ်။ ရှေ့ဆက်အပေါင်းတို့၏ ...
ဘော်လီဘောမှာလီဘာရိုကဘယ်သူလဲ တခြားကစားသမားတွေနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။ အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်မှာလဲ? Libero အစားထိုးသည်။ စည်းကမ်းအနေဖြင့်၎င်းတို့၏2သည်4ဖြစ်သည်။ ငါဘာလို့လိုအပ်လဲမျှော်လင့်ပါတယ်
parkour ကဘာလဲ? Yamakashi ကြည့်ခဲ့လား။ ဒါဟာမြို့ပြအစွန်းရောက်အားကစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးအိမ်ခေါင်မိုးများ၊ နံရံများခုန်ခြင်း၊ pirouettes အစရှိသည့်မြန်နှုန်းမြင့်လှုပ်ရှားမှုပုံစံဖြစ်သည်။ ပါရူသည်ဆင်ခြင်တုံတရားလှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အတားအဆီးများကိုကျော်လွှားခြင်းအနုပညာဖြစ်သည်။
Kyokushinkai ဆိုတာဘာလဲဒါကကရာတေးလမ်းကြောင်းပဲ။ သင်ကျောင်းပြောနိုင်သည် ၎င်းတို့သည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော kyokushin အကြောင်းရေးသားထားပြီးဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရန်မလိုပါ။ ခါးပတ်သည်အနီရောင်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်၊ သို့သော်တည်ထောင်သူအမ်အိုရာမာပင်လျှင်
တင်းနစ်အတွက်ချိုး၏ဘာလဲ? တုပ်နှောင်-Break နိုင်ပါတယ် (Eng ။ ချည်နှောင်-ချိုး, အအက္ခရာများအတွက်။ trans ဆိုတဲ့။ အင်္ဂလိပ်ကနေ။ သွယ်တန်းဆွဲယူ) ကဒါခေါ်တာရှည် UHP များသောအားဖြင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလက်မခံ vedt ဘယ်မှာဂိမ်းနှင့် putm ...
ငါအားကစားအကူအညီနှင့်ပတ်သက်။ အစီရင်ခံစာရေးသားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါတကယ်အားကစားနှင့်ပတ်သက်သောအလွန်ကောင်းသောစာသားကိုလိုအပ်သည်။3Report: အားကစားသည်အားကစားဘုရင်မဖြစ်သည် ။————————————————————— နှစ်ပေါင်းများစွာမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါ။
စိန့်ပီတာစဘတ်မှာမိုးလုံလေလုံ rollerdrome ဘယ်မှာလဲ။ Rollerdrome "Maza Park" (ဘူခါရက်စ်) စိန့်ပီတာစဘတ်, ul ။ ဘူခါရက်စ်၊ 30 / 328 (812) 64 33333http: //www.mazapark.ru/bhr/fun/rollerdrom/ ခေတ်သစ်လူငယ်အားကစား၏ဗဟိုချက်၊ ZhesstSankt-Petersburg၊ မော်စကိုဒေသ၊ အာကာသယာဉ်မှူး၊ 38၊3ကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ....
AWPC ခုံတန်းလျားစာနယ်ဇင်း - ပစ္စည်းကိရိယာများအဘယ်သူမျှမ
AWPC ခုံတန်းလျားစာနယ်ဇင်း - ပစ္စည်းကိရိယာများ 1 စည်းမျဉ်းများမရှိဘဲ) ချက်ချင်းထုတ်ပေးသည်။ သို့သော်သင်သည်အားကစားကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင့်အားနည်းပြကမည်သို့လေ့ကျင့်ပေးသည်ကိုသင် xnumx ကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည် သူ့ကို2ကိုမေးပါ။ ခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာ ...
17 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,357 စက္ကန့်ကျော် Generate ။